कसरी जोगाउने कलेजो ? – TajaNepal
Home /Blog/कसरी जोगाउने कलेजो ?
कसरी जोगाउने कलेजो ?
खानपानका सौखिन मानिस धेरै हुन्छन् । खानापान भनेपछि उनीहरू जे पनि खाने गर्दछन् । बिना कुनै सोच–विचार जे भेट्यो, त्यही खाने गरेकै कारण यस्ता व्यक्तिलाई तौल बढ्ने लगायतका स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या हुने गर्छ । त्यसमध्ये एउटा समस्या कलेजोको खराबी पनि हो । शरीरको आवश्यकता भन्दा बढी मात्रामा खानेकुरा सेवन गर्नाले फोक्सो तथा मिर्गौलामा असर पर्नुका साथै कलेजो समेत खराब हुने गर्छ । आखिर आवश्यक भन्दा बढी खानेकुराले कलेजो कसरी खराब गर्छ ? र यसबाट बच्न के गर्ने ?
कलेजो र यसको आवश्यकता
कलेजो मानव शरीरको सबैभन्दा ठूलो ग्रन्थि हो । यो मानव शरीरको माथिल्लो भागमा हुन्छ । यसले खाना पचाउनुका साथै शरीरमा कैयौँ प्रकारका महत्वपूर्ण कार्य गर्दछ । त्यसमा पनि यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य भनेको यसले पित्तको उत्पादन गर्दछ । पित्त एक तरल पदार्थ हो, जुन पित्तथैलीमा जम्मा भएको चिल्लो तथा बोसोलाई पचाउन मद्दत गर्छ । यसले रगतलाई छान्नसमेत मद्दत गर्छ । विशेष गरी कलेजोले कार्बोहाइडे«ट्सलाई ग्लाइकोजेनको रूपमा जम्मा गर्छ र आवश्यक परेको बेलामा त्यसलाई ग्लुकोजको रूपमा निकाल्छ । कलेजोले हामीले सेवन गर्ने खराब तत्वलाई निष्क्रिय बनाउनुका साथै शरीरमा पर्याप्त मात्रामा प्रोटिनको उत्पादन गर्दछ, जसले शरीरमा विभिन्न रोगको सङ्क्रमण हुनबाट तथा रक्तस्राव हुनबाट जोगाउँछ । कलेजोले नै शरीरका लागि आवश्यक पर्ने भिटामिन, मिनरल्स भण्डारण गर्ने भएकाले कलेजोले सही तरिकाले काम गरोस् भन्नका लागि कलेजोलाई स्वस्थ राख्न जरुरी छ ।
धेरै खाँदा कलेजोमा असर
अत्यधिक मात्रामा बोसोयुक्त आहारको सेवनले रक्तनलीमा बोसो जम्ने गर्छ र कलेजोले सही तरिकाले काम गर्न नसक्दा शरीरमा विषाक्तता जम्मा हुने गर्छ । यति मात्र हैन, आवश्यकता भन्दा धेरै परिमाणमा खाना खाँदा पेट तथा तौल बढ्ने गर्छ । खानामा पनि एनिमल फ्याटको अधिक सेवनले कलेजोको आर्टरी मोटो हुने गर्छ, जसका कारण पित्तथैलीमा पत्थरी हुने सम्भावना बढ्छ । आवश्यकता भन्दा बढी खानाको सेवनले बोसो पचाउन समस्या हुनुका साथै तौल घटाउन समेत गाह्रो हुन्छ ।
कलेजोलाई स्वस्थ राख्न खानपानमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । कलेजो स्वस्थ राख्न आवश्यकता अनुसार मात्र खाना खाने, सन्तुलित भोजन गर्ने, कलेजोलाई स्वस्थ राख्ने तत्वको सेवन गर्ने तथा बोसोयुक्त खानेकुरा कम खाने गर्नुपर्छ । मधुमेह वा मोटोपनाको समस्या हुने व्यक्तिले चिकित्सकको सल्लाहअनुसार डाइट चार्ट फलो गर्ने तथा खाना खाँदा थोरै तर पटक–पटक खाने गर्नुपर्दछ ।
जीवनशैलीमा साधारण परिवर्तन गरेर पनि कलेजोसम्बन्धी समस्याबाट जोगिन सकिन्छ । जीवनशैली परिवर्तन गर्ने भन्नाले सन्तुलित आहारको सेवन, पर्याप्त निद्रा, नियमित व्यायाम भन्ने बुझिन्छ ।
धेरै खाने व्यक्तिले नियमितरूपमा व्यायाम गर्न जरुरी छ । नियमित व्यायाम गर्नाले शरीरमा वजन बढ्न पाउँदैन । नियमित व्यायाम गर्दा सन्तुलित आहार सेवन गर्नुका साथै ट्रेनरको सल्लाहअनुसार खानेकुरा खान जरुरी छ । व्यायाममा गरेको सानो लापरवाहीले पनि कलेजोमा असर पर्न सक्छ ।
आवश्यक भन्दा बढी मात्रामा खानेकुराको सेवनले पनि कलेजो बिग्रन्छ । मधुमेह रोगका कारण कलेजो बिग्रने सम्भावना धेरै हुने भएकाले उनीहरूले खानपानमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । यसका साथै नियमित चेकजाँच गर्ने तथा चिकित्सकको सल्लाहअनुसार नियमित औषधि सेवन गर्ने गर्नुपर्छ । गलत खानपानका कारण कलेजोमा गम्भीर समस्या निम्तन सक्छ ।